नेपालमा मिटू अभियानः कस्ता आए प्रतिक्रिया ? |
नेपालमा मिटू अभियानः कस्ता आए प्रतिक्रिया ?
प्रकाशित मिति :2018-10-24 17:29:00
ललितपुर । रश्मीला प्रजापतिले यही साताको आईतबार काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन मेयर केसव स्थापितबारे लेखेको यौन दुव्र्यवहारको घटनाले हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
आफू काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत रहँदा स्थावितले गरेको दुव्र्यवहारका विषयमा केन्द्रित भएर उनले बुधबार पुनः आफ्नो फेसबुक स्टाटस मार्फत मिटू अभियानको बारे यसरी लेखेकी छन्, ‘आफूमाथि भएको यौन दुव्र्यवहार विरूद्ध बोल्न सहज छैन । धेरैले यसलाई सामान्य रूपमा लिएको देखियो । आफैं वा परिवारका सदस्यमाथि यौन हिंसा भएपछि मात्रै यसको पीडा थाहा हुन्छ, शायद । तर पनि मैले बोल्ने आँट गरे, म माथी भएको यौन दुव्र्यवहार र अन्याय विरूद्ध ।
मिटू अभियानले विश्वभरका महिलाहरूलाई शक्तिशाली पुरूषहरूद्वारा आफूमाथि भएका यौन हिंसा विरूद्व बोल्ने साहस दिएको छ । यदि कसैमाथि कुनै पनि बेला यौन हिंसा भएको भए यसको विरूद्व आवाज उठाऔं ।’
प्रजापतिले पोष्ट गरेको स्टाटसमा मोहन शाक्य नाम गरेका व्यक्तिले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘अभियानले पक्कै पनि विश्वभरका महिलाहरु भएको यस्ता दुव्र्यवहारको खुलासा गर्ने अवसर साथै महिलाहरुलाई संशक्तीकरण गराउने र यो रुढीबादी समाजमा भएको विकृति, विसंगतिलाई फाल्ने जमर्कोले सामाजिकरणसँगै अहम् भुमिका निर्वाह गरेको छ ।
तर हाम्रो चेलिहरुप्रती माननीयज्यूले आफ्नो हवशको सिकार बनाउने कोशिस गरेको खबरले हामीलाई दुःखी तुल्याएको छ । यस्ता नैतिकता नभएका मानवताको मकुण्डो लगाउनेलाई बेला मै पार लगाउनुपर्छ ।
फौजदारी कानूनले होइन, अब आदिमकालका हाम्रो कानूनले कारबाही गर्नुपर्छ । नत्र केही समयपश्चात फेरि यही समाजमा माननीय स्थापित हुन्छन् ।’
नेपालमा ‘मिटू अभियान’लाई अघि बढाउँदै प्रजापतिसहित पूर्वपत्रकार उज्जला महर्जनले पनि काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर तथा हाल प्रदेश नम्बर ३ का भौतिक योजना मन्त्री केशव स्थापितमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाएकी छिन् ।
अमेरिकामा गत वर्षबाट शुरु भएको ‘ह्यासट्याग मिटू’ (मिटू) अभियान भारत हुँदै नेपालमा पनि भित्रिएको छ । अमेरिकामा हलिउडदेखि राजनीतिक क्षेत्रका ठूलठूला नामहरु यौन उत्पीडनको आरोपमा मुछिएका छन् । यही अभियान भारतमा समेत चर्चित छ ।
राज्यमन्त्रीदेखि, प्रख्यात कलाकार र पत्रकार समेत उक्त अभियान अन्तर्गत आरोपितको सूचीमा परेका छन् भने तीमध्ये कतिपयले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । महिलामाथि हुने यौन दुव्र्यवहारबारे गत वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा चलेको अभियानको प्रभाव नेपालमा पनि परेको हो ।
नेपालमा देखिएको अभियानको प्रभावबारे डा. बाबुराम भट्टराई आफ्नो टुइटर मार्फत यस्तो विचार राख्छन्, ‘मिटूनेपाल’लाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।
सापेक्ष रुपले लैंगिक समानता बढी भएका पश्चिमी देशहरुमा त महिलाहरुले यौन हिंसाबारे मुख खोल्न त्यति समय लागेको थियो भने हाम्रो समाजमा कति कठिन होला सहज बुझन सकिन्छ । साहसी महिलाहरुको प्रतिरोधको आवाजलाई साथ दिऊँ ।’
नेपालमा पछिल्लो समय यौन दुव्र्यवहारका घटना बढ्दो छ । त्यस्ता घटनाबारे केही महिलाहरु बोल्न थालेका छन् भने धेरै घटनाहरु बाहिर आउन सकेका छैनन् । तर यस्ता अभियानले यस्तै घटनाहरुलाई बाहिर ल्याउन सहज तुल्याएको छ ।
मिटू अभियानबारे रिता बराल टुइट गर्छिन्, ‘मिटु’ एउटा राम्रो अभियान छ । आफ्नो जीवनको कुनै कालमा आफूमाथि भएका यौन हिंसा सबैको सामुन्ने ल्याएर आफ्नो मनमा भएको बोझ हल्का गर्ने । कुकर्मको फल ढिलो भए पनि पाईन्छ भन्ने परिपाटी बसाल्न यसलाई सहयोग गरौं । यो अभियानलाई जालझेल र रिसिबी साध्ने माध्यम हुनबाट बचाऊ ।’
यस्तै अभियन्ता राधा पौडेल लेखिछन्, ‘ नेपालमा नौलो होइन र थिएन । तर जसले बोले वा उजुरी गर्ने दुस्साहस गरे, उनीहरुले सहयोग र साथ पाएनन् । अझै पनि नेपालमा यसले छिमेकी मुलुकमा झैँ बाढी ल्याउने कुरामा शंका गर्न सकिने प्रसस्त ठाउँ छ किनभने सहयोग र न्याय कतै, कहीँबाट पाउन सकिने संयन्त्र वा कोही कसैसंग विश्वास नै छैन ।’
‘मिटू नेपाल’को बारेमा डा.एसिया अर्याल टुइट गर्छिन्, ‘आफूमाथि यौनजन्य अपराध भएको खुलासा गर्नुभन्दा यस्ता अपराधिक क्रियाकलापबाट कसरी बच्न सकिन्छ यसप्रति सचेतनामूलक अभियान चलाउन जरुरी छ ।
पश्चिमा समाज त अझै अचेत छ यो विषयमा, हाम्रो यो अन्धो समाज जसलाई उज्यालोको जरुरी छ, ‘मिटूनेपाल’ को हैन । जसले पीडकलाइ अझ नाङ्गो नबनाओस् ।’
नेपालमा ‘मीटू अभियान’सँगै लुकेका र दबेका यौन दुव्र्यवहारका घटना बाहिर आउन् । महिला वस्तुसरह हुन् । पद र पैसा हुँदा महिलालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताको पर्दाफाँस होस् । ‘मीटू अभियान’ ले सार्थकता पाओस् । हाम्रो पनि शुभकामना ।